ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး နံပါတ် (၁) ဘရန်းနေရာကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့ Gucci - For her Myanmar
အောင်မြင်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းပြီး ထိပ်ဆုံးကို ပြန်ရောက်လာပြီလေ
၂၀၁၈ ပထမနှစ်ဝက်လောက်က စပြီး ဆိုရှယ်လ်မီဒီယာတွေ၊ ဆယ်လီတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Gucci ကို ယောင်းတို့လည်း သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်.. ဒီဇိုင်းကာလာအနေအထားတွေ လှသလို ဈေးလည်းလှလို့ ကိုယ်တွေ သွားရည်ကျရတဲ့ Luxury Brand ပေါ့လေ… ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလမှာတော့ Off-White Brand က ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး ဘရန်းသရဖူကို ယူထားခဲ့ပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့ Gucci က ဒီသရဖူကို ပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
အွန်လိုင်းအသုံးပြုပြီး ဝယ်ယူကြတဲ့ လူအယောက် (၅) သန်းကျော်ကို စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ Gucci က ကြည့်ရှုသူအများဆုံး၊ ဝယ်ယူသူအများဆုံးနဲ့ နံပါတ်(၁)နေရာကို ပြန်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလနဲ့ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ Gucci ရဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ (၆) သန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလတွေမှာ အရောင်းရဆုံး အသုံးအဆောင် (၁၀) ခုထဲမှာ Gucci ရဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရောင်းရနှုန်းက တခြားပစ္စည်းတွေ (၈)ခုပေါင်း ရောင်းရတဲ့ အရေအတွက်ထက်တောင် ပိုများနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (ဒီလောက် ဈေးကြီးတာတောင်မှ ရောင်းရချက်ကတော့နော် T.T ) တစ်ခုကတော့ ၂၀၁၄ က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Gucci Soho Disco အိတ်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ Gucci logo ပါတဲ့ ခါးပတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Off-White နဲ့ Balenciaga တို့ကတော့ ဒုတိယနဲ့ တတိယနေရာကနေ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ Moncler ကတော့ နံပါတ် (၄) နေရာကို အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ခုန်တက်လာပြီး Fendi ကလည်း Fila နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ collection ကို အကြောင်းပြုလို့ နံပါတ် (၅)နေရာကို ရောက်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ Versace, Stone Island, Vetement, Valentino စတဲ့ နာမည်ကြီး ဘရန်းတွေကလည်း နံပါတ် (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉) နေရာတွေမှာ အသီးသီး နေရာယူထားပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် ထိပ်သီးဖြစ်လာတဲ့ ဘရန်းတွေထဲမှာရော ယောင်းအကြိုက်တွေမှ ပါရဲ့လား?
အောငျမွငျမှုအပေါငျး သရဖူဆောငျးပွီး ထိပျဆုံးကို ပွနျရောကျလာပွီလေ
၂၀၁၈ ပထမနှဈဝကျလောကျက စပွီး ဆိုရှယျလျမီဒီယာတှေ၊ ဆယျလီတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ Gucci ကို ယောငျးတို့လညျး သတိထားမိကွမယျ ထငျပါတယျ.. ဒီဇိုငျးကာလာအနအေထားတှေ လှသလို ဈေးလညျးလှလို့ ကိုယျတှေ သှားရညျကရြတဲ့ Luxury Brand ပေါ့လေ… ၂၀၁၈ အောကျတိုဘာလမှာတော့ Off-White Brand က ကမ်ဘာ့နာမညျအကွီးဆုံး ဘရနျးသရဖူကို ယူထားခဲ့ပမေဲ့ ခုခြိနျမှာတော့ Gucci က ဒီသရဖူကို ပွနျသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပါပွီ။
အှနျလိုငျးအသုံးပွုပွီး ဝယျယူကွတဲ့ လူအယောကျ (၅) သနျးကြျောကို စဈတမျးကောကျကွညျ့ပွီးနောကျမှာတော့ Gucci က ကွညျ့ရှုသူအမြားဆုံး၊ ဝယျယူသူအမြားဆုံးနဲ့ နံပါတျ(၁)နရောကို ပွနျရောကျရှိလာတာဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၈ အောကျတိုဘာလနဲ့ ဒီဇငျဘာလအတှငျးမှာ Gucci ရဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှကေို အှနျလိုငျးဝကျဘျဆိုကျကနေ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုသူ (၆) သနျးကြျောရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီလတှမှော အရောငျးရဆုံး အသုံးအဆောငျ (၁၀) ခုထဲမှာ Gucci ရဲ့ပစ်စညျးနှဈခုရောငျးရနှုနျးက တခွားပစ်စညျးတှေ (၈)ခုပေါငျး ရောငျးရတဲ့ အရအေတှကျထကျတောငျ ပိုမြားနသေေးတယျလို့ သိရပါတယျ။ (ဒီလောကျ ဈေးကွီးတာတောငျမှ ရောငျးရခကျြကတော့နျော T.T ) တဈခုကတော့ ၂၀၁၄ က ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Gucci Soho Disco အိတျဖွဈပွီး နောကျတဈခုကတော့ Gucci logo ပါတဲ့ ခါးပတျပဲဖွဈပါတယျ။
Off-White နဲ့ Balenciaga တို့ကတော့ ဒုတိယနဲ့ တတိယနရောကနေ ဦးဆောငျနပေါတယျ။ Moncler ကတော့ နံပါတျ (၄) နရောကို အရှိနျအဟုနျပွငျးပွငျးနဲ့ ခုနျတကျလာပွီး Fendi ကလညျး Fila နဲ့ collab လုပျထားတဲ့ collection ကို အကွောငျးပွုလို့ နံပါတျ (၅)နရောကို ရောကျလာတာကို တှရေ့မှာပါ။ Versace, Stone Island, Vetement, Valentino စတဲ့ နာမညျကွီး ဘရနျးတှကေလညျး နံပါတျ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉) နရောတှမှော အသီးသီး နရောယူထားပါတယျ။
ဒီတဈခေါကျ ထိပျသီးဖွဈလာတဲ့ ဘရနျးတှထေဲမှာရော ယောငျးအကွိုကျတှမှေ ပါရဲ့လား?
Tags: brand, Fashion, Fashion News, fashionista, gucci, guccigang, highend, luxury, Style, trend